I-Kaizer Chiefs yephula isiqalekiso | Scrolla Izindaba
I-Kaizer Chiefs yephula isiqalekiso
Ngokokuqala ngqa emlandweni wabo i-Kaizer Chiefs ingene kweyamaqoqo e-CAF Champions League.
Umzuzu oyingqophamlando waMakhosi ufike ngoLwesibili ntambama ngesikhathi beshaya iziqhwaga zase-Angola i-Premmeiro de Agosto ngegoli elilodwa eqandeni sekuhlanganiswe imilenze yomlenze wesibili womzuliswano wokuqala.
Igoli elibaluleke kakhulu lize nomdlali ovelele wase-Colombia uLeonardo Castro esiwombeni sokuqala futhi kwanele ukuvala isibopho se-Chiefs e-Angola. Njengoba umlenze wokuqala obusenkundleni yezemidlalo i-FNB uqede wamagoli ubusuku obune obudlule, Amakhosi bekufanele egebhe ajule ukuze athole indawo lapho kuzobanjelwa khona umdlalo wamaqoqo eGibhithe ngoLwesihlanu.
Lokhu kube ukunqoba kwesibili kwe-Chiefs ekuhambeni emzuliswaneni wokuqala. Yomibili imidlalo yabo yasekhaya iphele ingabanga namagoli.
Abakholelwa ku-Amakhosi banesizathu sokumamatheka futhi lapho ebona iqembu lawo linqoba umdlalo wokuqala wonyaka futhi liqhubeka kulo mqhudelwano. Ukunqoba kwangoLwesibili akuyona eyomlando kuphela eqenjini kepha nakumqeqeshi uGavin Hunt.
UHunt uzongena ezincwadini zomlando we-Chiefs njengomqeqeshi wokuqala owake wakhomba iziqhwaga zase-Soweto emidlalweni yamaqoqo e-CAF Champions League. Lokhu kuzonika yena nabadlali bakhe isikhuthazo abasidingayo ukubhekana nesimo sabo esinzima kwiligi yasekhaya.
Emdlalweni wase-Angola kuphinde kwabuya intandokazi yabalandeli besizini edlule uSamir Nurkovic ongene endaweni kaCastro. Lona bekungumdlalo wokuqala kaNurkovic wesizini ye-Chiefs kanti kulindeleke ukuthi adlale okokuqala kwi-DStv Premiership ngoMgqibelo lapho Amakhosi ezobhekana ne-Maritzburg United.
Elinye iqembu laseNingizimu Afrika elizoba semqhudelwaneni wamaqoqo ngoLwesihlanu ngabadlali abanqobe i-Mamelodi Sundowns ngowezi-2016 kwi-Champions League. NgoLwesibili i-Downs ishaye i-Jwaneng Galaxy yase-Botswana ngamagoli amathathu kwelilodwa emlenzeni wesibili ePitoli.
Njengoba umlenze wokuqala e-Botswana uqede ngamagoli amabili eqandeni uvuna i-Sundowns kusho ukuthi i-Downs inqobe ngokulingana ngamagoli amahlanu kwelilodwa uma sekuhlanganiswe yonke indawo ukuze iphinde izibekisele indawo kumaqoqo.
Umdlalo olandelayo we-Sundowns ne-Baroka kwiligi ungoMgqibelo.
Nayi imiphumela yangoLwesibili ye-DStv Premiership:
I-Swallows inqobe ngamagoli amathathu kwamabili idlala ne-Cape Town City; I-TS Galaxy amaqoli amabili kwamabili idlala ne-Baroka; I-Stellenbosch amagoli amabili eqandeni idlala ne-Tshakuma FC.